Qarax ka dhacey Xaafada Sheelare ee degmada Xamar jajab – idalenews.com
Qarax ka dhacey Xaafada Sheelare ee degmada Xamar jajab
Qarax ayaa saakay ka dhacay xaafada Sheelare oo aan sidaas uga fogeyn xarunta uu ka socdo shirka ansixinta dastuurka ee Akademiyada Ciidanka Booliiska ee General Kaahiye ex- Dugsigii Sare ee Booliiska (Scoula Polizia). Qaraxaasi ayaa la sheegey inuu ahaa mid wadada dhinaceeda la dhigey oo la doonaayey in waxyeelo lagu geysto balse sida ay wararku sheegayaan ma jiraan cidna wax ku noqotey marka laga reebo bisad halkaas ku sugneyd oo waxyeelo soo gaartey.
Markii qaraxaasi dhacey ka dib, ciidanka booliiska iyo kuwa AMISON ayaa halkaas soo buux dhaafiyey kuwaas oo barar koontorool ku lahaa meelo aan sidaas uga fogeyn halka qaraxu ka dhacey.
Sidoo kale, Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ayaa yimid goobta qaraxu ka dhacey, waxuuna saxaafada u sheegey in ay weli baaristu socoto, cid loo qabteyna aysan jirin, laakiin saxaafada loo soo gudbin doono waxii warar ah oo arrintaas la xiriira.
Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatey masuuliyada qaraxii maanta balse magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhaca qaraxyo musliyadeedu sheegtaan Ururka Al-Shabab. Qaraxyada ka dhaca magaalada ayaa inta badan waxyeelo ka soo gaartaa dad shacabka oo aan waxba galabsan oo wadada maraaya.
Idale News Oline (INO) – MOGADISHU
Henry Bellingham, Wasiirka Afrika Ee dowladda Ingiriiska oo aad u dhoweeyey warbixintii Monitoring group ee Somalia